Ndị a bụ usoro enyere na 2022 Golden Globes | Bezzia
Maria onyekwere | 13/01/2022 12:00 | Akụkọ
La 79th mbipụta nke Golden Globes, ihe nrite nke Hollywood Foreign Press Association, emere na Jenụwarị 10. Enweghị kapeeti uhie ma ọ bụ gala dị ka mmadụ nwere ike ịtụ anya na nnyefe na-ebelata ka ọ bụrụ ihe nzuzo nke a na-agụ akwụkwọ nke ndị mmeri.
Mgbe ebubo nke nrụrụ aka na enweghị ọdịiche dị iche iche, e kesara Golden Globes na enweghị mmasị dị ukwuu n'agbanyeghị na mgbasa ozi anaghị egbu oge ikwughachi ndị mmeri. Na udi nke Television enwere ihe na-enweghị mgbagha: HBO's 'ọganihu'.
3 Gbọ oloko nke ala
Ịga nke ọma bụ ọkacha mmasị na ngalaba telivishọn ma hapụghị aka efu. Nke hbo ezinụlọ ejije ọ bụghị naanị Golden Globe maka usoro ihe nkiri kacha mma kamakwa onyinye abụọ maka ndị na-eme ihe nkiri: Sarah Snook, maka onye na-eme ihe nkiri na-akwado kacha mma, na Jeremy Strong maka onye na-eme ihe nkiri kacha mma.
Usoro a na-akọ Mkpagbu ezinụlọ Roy, Logan Roy na ụmụ ya anọ. Nke mbụ nwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi audiovisual na ntụrụndụ nke ụmụ ya anọ na-arọ nrọ iketa. Ya mere usoro a na-enyocha ndụ ha ka ha na-atụgharị uche n'ihe ga-eme n'ọdịnihu mgbe nna ochie nke ezinụlọ hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Akụkọ ifo nke Adam McKay zọọ ọkwa n'ụdị ya na 'Pose', 'The Squid Game', 'The Morning Show' na 'Lupine', mana ha enweghị ike ime ihe ọ bụla megide usoro a jikọtara ọnụ nke oge nke atọ, juputara na ihe ịtụnanya na ndebanye aha ọhụrụ, hapụrụ ndị na-akwado ya. ọnọdụ dị mgbagwoju anya.
Hacks meriri dị ka ihe nkiri kacha mma nke afọ n'ihu ihu ọma Ted Lasso. Usoro a na-eduga n'isi nke usoro kachasị mma nke afọ ruo ọnwa ole na ole, ma ọ bụghị ruo December 15 mgbe na Spain anyị nwere ohere ịhụ ya. HBO Max.
Isiakwụkwọ iri mebere oge izizi nke usoro isiokwu a nke isiakwụkwọ ya na-adị naanị nkeji iri abụọ na ise. Lucia Aniello mebere ya, usoro a nwere dị ka ndị na-akwado ya abụọ na-akpa ọchị kara aka ịghọta ibe ha. Deborah Vance, diva monologue nke na-eme ihe ngosi kwa abalị nke afọ na cha cha Las Vegas, nọ n'otu akụkụ nke atụmatụ ahụ. Ava Daniels, nkwa na-eto eto nke ọchị nke hụrụ ka ọrụ ya dị mkpụmkpụ ka 'tweet' na-adịghị mma, na nke ọzọ.
N'ịbụ ndị chere na enwere ike ịkagbu ụfọdụ nọmba ya, Deborah Vance, nke Jean Smart na-egwuri egwu, a manyere ịnakwere enyemaka nke rookie Ava Daniels, nke Hannah Einbinder na-eme. Mmekọrịta dị n'etiti ha Ọ ga-esi ike na mbụ, mana ọ ga-aka mma?
Usoro ewepụtara na United States na Mee 13, 2021 meriri nturu ugo atọ na Emmy Awards kacha ọhụrụ, nke Golden Globe sonye na ya ugbu a maka usoro ihe ọchị ma ọ bụ egwu kacha mma. Ị ga-anwale ya?
Gbọ oloko nke ala
Dabere na akwụkwọ homonymous Site na Pulitzer Prize-emeri Colson Whitehead ma mepụta ya maka obere ihuenyo site n'aka Barry Jenkins, onye isi mmeri Oscar nke Moonlight, The Underground Railroad meriri Miniseries kacha mma na Golden Globes.
Nke a Amazon Prime Miniseries na-ewebata anyị Cora (nke Soo Mbedu na-akpọ), ohu onye gbapụrụ n’ubi Obodo ndịda ebe o bi ma na-aga site na steeti dị iche iche n'ihi okporo ụzọ ụgbọ oloko dị omimi. Echiche nke Whitehead chepụtara iji kọwaa ụzọ ahaziri nke ọma nke mere ka ọ dịrị ndị ohu mfe ịnweta nnwere onwe ha.
Ma ọ bụ na mmalite nke narị afọ XIX site n'enyemaka nke ndị na-emegide ịgba ohu, a netwọk nzuzo iji nyere aka duzie ndị ohu n'ime steeti ndị nweere onwe ha. Ya mere, n'agbata 1810 na 1862 netwọk nke "ndị ọkwọ ụgbọ ala" na "ndị isi ọdụ", ndị na-eduzi na ndị na-ezobe ndị gbara ọsọ ndụ n'ụlọ ha, n'otu n'otu, a na-eme atụmatụ na a zọpụtara ihe dị ka 100.000 mmadụ.
Na mgbakwunye na crudely-egosi ndụ ndị ohu n'ugbo, nkwa na kpokọtara n'ezie iwebata ihe ndị dị ike nke na-enye ohere ijikọ oge gara aga na ugbu a nke ndụ ndị obodo ojii America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ndị a bụ usoro enyere na 2022 Golden Globes